Abazali abaningi bathanda qhathanisa ipumelelo ingane yabo siqu impumelelo ezinye izingane, okungukuthi ngokuphelele okungalungile, ngoba umuntu ngamunye indlela umuntu yokukhula. Ngakho-ke, kumelwe thina siqale ngokumazi Ngokwesilinganiso, ezivamile amazinga wezokuthuthukisa abantwana abasebancane alinganayo kubo.
Ungesabi nakancane uma iminyaka efinyelela kwemithathu e ingane ukuhambisana ngempela efanele umsindo esikhundleni, ukuhlanekezela yabo. Kodwa uma amaphutha musa zinyamalale yobudala amadala - lutho kodwa nokubambezeleka of zokukhuluma. It akunakugwenywa futhi kube yilapho sekwephuze kakhulu, ukuthatha izinyathelo esiphuthumayo zokulungisa.
Ibambezelekile ukuthuthukiswa kolimi singenzeka ngenxa yezizathu eziningi:
- umama eqinile toxicosis lapho ukhulelwe;
- isifo (kuhlanganise ezingamahlalakhona), idluliselwe nomama lapho babegqoka ingane;
- ezingamahlalakhona hypoxia nomntwana esizalweni;
- choking okuncane;
- ngisho ukulimala ezincane ukuze isimiso sezinzwa ku abasafufusa Rhesus ingxabano phakathi kukamama umbungu;
- ukuhlukumezeka ngesikhathi sokubeletha;
- izifo ezithathelwanayo ezithwalwa ingane isakhasa.
Inkulumo iziyaluyalu iphathwa ngempumelelo ngemizamo ahlangene abazali, inkulumo abelaphi, odokotela bengqondo futhi neurologists. Into esemqoka - ukuqaphela inkinga ngendlela esifike ngesikhathi. Kuyinto njalo kulula ukuvimbela isifo esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe, ngakho abazali kufanele bazazi ukuhlukahluka ekukhuleni kwengane bathi esikhathini esizayo kungase kube nokubambezeleka of zokukhuluma.
Ngakho, qiniseka ukuba ngilidlulisele nodokotela osiza abanezinkinga zokukhuluma uma:
1. Phakathi nokugwinya, oncelayo, aphuma uketshezi okuqinile nobunzima ukudla kuphakama.
2. Kukhona ukubambezeleka lengqondo.
3. Dentist waxwayisa anomalies we emihlathini namazinyo.
4. i- lip kanye nolimi, lapho kwakhiwa okungalungile le ukuhambisana is.
5. Ilokhu drools.
6. Ingane unaphakade ngomlomo ovulekile.
Inkulumo ukubambezeleka kungaba ngokwengxenye futhi yesikhashana futhi cishe engelapheki. Uma evuthiwe ukuzwa izinyane iminyaka 3-5 ngokuphelele noma cishe akusho ukukhuluma, ungakwazi ukukhuluma Alalia. Lokhu ukuphambuka kubangelwa izilonda e Nenkabazwe kwesokunxele ubuchopho izindawo obhekene inkulumo. Ingane ivame ukuxhumana, ongezwa evamile, ukuhambisana apharathasi isebenzisa isimo sobuso nokushukuma komzimba. Ngeke ngokuthi ebhasha ngokwengqondo. Siza sibhekane ngokuphumelelayo Alalia kuphela owelapha abanolwazi, ngubani oyoba Uhlelo kwezimilo ngakunye ingane.
Ngenhlanhla, lokhu ezingavamile kakhulu. Okuningi njalo enkulumweni ukubambezeleka kwentuthuko ngenxa ukuthuthukiswa engaguquki umntwana. Kuzothatha amabili kuya eminyakeni emithathu kuthi kungazelelwe ngokushesha uhambisane, ngeke ekugcineni baba ikhuluma.
Yiqiniso, ukulinda iminyaka emithathu ukuze siqiniseke ukuthi konke kuzolunga, futhi, hhayi zinkulu. Kungcono kudokotela. Bayobe wafunda ukubambezeleka nokukhulunywa ingane ethile, wafunda ukuze ugweme retardation engqondo, ukuzwa ukungakhuli noma ezinye izifo zona kungabangela ukubambezeleka.
Yini engenziwa ukuze ingane ekhaya ukuze zokukhuluma ukubambezeleka ayibuyi nenkinga enkulu ngokwengqondo?
Okokuqala, ukufundwa ahlangene nezincwadi, ikakhulu usebenza zezinkondlo, becula izingoma. Udinga ukubiza konke siboniswa izibalo, cela ingane yakho ukuba ibonise lokhu noma lokhuya kuncike, ukuchaza ukuthi kuyini. Kid kufanele babone ukuthi abazali babo ukufunda okuningi, ukuqonda ukuthi kubaluleke kangakanani lokhu. Kuyadingeka ukuchaza konke izungeza ingane, ephelezelwa amazwi zonke izenzo kanye siqu sakhe. Nsuku zonke kuba efiselekayo ukwengeza kwisichazamazwi umntwana okungenani ambalwa amagama amasha, ukuphinda ukuba bakhumbule kangcono. Udinga ukumkhuthaza ukuba athathe isinyathelo, ukuqinisekisa ukuthi wakhuluma ngokuthi sachitha usuku lonke ngalokho ayekwenzela; ukuthi yasungulwa yezinganekwane, izindaba.
Kunoma yikuphi abakwazi kubhekwe inkinga ezifana ukubambezeleka zokukhuluma bangakufanelekeli ukunakwa, futhi ushiye konke ukuba zizenzakalele ngenhlanhla. Ingane angabhekana ngayo futhi wenze inqubekela phambili ebonakalayo kuphela ngosizo onothando nokukholelwa abazali bakhe.
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi ziphathwa kanjani indlala yegilo
De Quervain sika isifo: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Izimpawu zesifo sokuqaqamba kwamalunga: indlela lesi sifo?
Hypocalcemia: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Yini engcono ukwakha indlu ezweni?